भेडा पालनसँगै नमुना व्यक्तित्व बनेका छन् मुगुका बुढा | Radio Nepal | रेडियो नेपाल
२०७८ साल माघ ६ गते बिहीबार
भेडा पालनसँगै नमुना व्यक्तित्व बनेका छन् मुगुका बुढा
बिनोद कुमार मल्ल २०७६ साउन १६ गते १३:३५
मुगु । हरेक दिन बाटो हिँड्दा होस् वा छिमेकीसँग बस्दा र भेडा चराउन जाँदा समेत खाली नबस्ने र ताखुको सहायताले ऊन कात्न डोरी कात्दै कुराकानी गर्ने र हिँडडुल गर्ने साधारण जीवनशैलीका ६१ बर्षीय तुलाराम बुढाको दिनचर्या हो ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं ११ रोबा गाउँका बुढाले भेडा पालन र हाते औजारको प्रयोगबाट कोट तथा ईष्टकोट बनाउने पाखो, राडीपाखी लिउ, फेरुवा बुनेर बर्षेनी लाखौ रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । बाङ्, सिरानी, चर्खा,रुली, बया, पिठान्नु, ताखु र पुईनाटा लगायतका घरेलु सामाग्रीबाट उनी उनजन्य बस्तुहरु बुन्ने गर्दछन् । २०३५ सालबाट राडी पाखी लगायत कोट बनाउने पाखो बुन्दै आएका बुढाले त्यतिखेर एउटा कोट बनाउने पाखोको १४ सय देखि १५ सयमा बिक्री गर्ने गरेको बताउछन् । तर आज भोलि एउटा पाखोको रु. ९ हजारमा बिक्री हुने गरेको छ ।
१४ जना परिवारको सदस्य भएको उनको घरमा भेँडा पालन र उद्योगबाट २०६५ साल यता १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरेको बुढाले बताए । उनले भने “उद्योग र भेँडा पालनको आम्दानीले दुई जना छोरा र बुहारीलाई उच्च शिक्षा सम्म पढाईरहेको छु भने घर खर्च गरि बचेको ५ लाख रुपयाँ बैङ्कमा बचत गरेको छु ।”
जिल्लामा विभिन्न समयमा हुने गरेका घरेलु उद्योगबाट उत्पादित बस्तुको प्रर्दशनीमा उनी ९ पटकसम्म राडीपाखीतर्फ प्रथम भईसकेका छन् । यसैगरि राडीपाखी बुनाईबाट जिल्लाकै उत्कृष्ट उद्योगीका रुपमा छनौट भई थाईल्याण्ड भ्रमण समेत गरेका छन् । हाल उनीसँग ८० वटा भेडा बाख्रा रहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेहनतको फल मिठो हुने र रुपैयाँ कमाउन बिदेशै जानु पर्छ भन्ने केही छैन मैले कसैलाई हात थाप्नु परेको छैन् । बरु मैले नै अरुलाई सहयोग गरेको छु ।’
हाल बजारमा कोट बनाउने पाखोको माग धेरै भएपनि माग अनुसार पुर्ति गर्न नसकेको उनले बताए । आफूले बुनेको पाखो काठमाण्डौ, पोखरा, लगायत बिदेशमा समेत बिक्री हुने गरेको बुढाको भनाई छ । परम्परागत तरिकाबाट उद्योग सञ्चालन गरेपनि समय धेरै लाग्ने गरेकाले पनि अझै अपेक्षित फाईदा लिन नसकेको उनको धाराणा छ । घरमा नै पालिएका भेडा बाख्राको ऊनबाट राडी, फेरुवा, लिउ उत्पादन गरेपनि कोट बनाउने कपडाका लागि भने उनले तिब्बतबाट प्रति किलो रु. ५ सयका दरले भेडाको ऊन खरिद गर्ने गरेका छन् । केही नगरि हात बाँधेर बस्ने तर बेरोजगार भयौं भन्ने युवाको लागि मेहनति बुढा जिल्लाकै नमुना उद्योगी बनी सबै युवाका प्रेणाका श्रोत बनेका छन् ।
मानवसेवा आश्रमलाई चार लाखको औषधी सहयोग
९ घन्टा अगाडि विश्वराम अधिकारी
पहिचान समितिद्वारा प्रतिवेदन पेश
निर्वाचन आयोगद्वारा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी २१ बुँदे मापदण्ड स्वीकृत
कास्कीमा राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता स्थगन
१० घन्टा अगाडि माधव पराजुली
कालीगण्डकी कोरिडोर: कतै काम तीव्र, कतै सुस्त
लिपुलेक विवादबारे भारतको स्पष्टीकरण
आजबाट काठमाडौँका यी स्थानमा बुस्टर डोज लगाउन पाइने
माघे सङ्क्रान्तिमा चेपाङ बालबालिकालाई नेवारी खाना
साहित्यकार डा.शर्माको कृति रन्थमोल भाग दुई लोकार्पण
तनहुँमा शल्यक्रिया सेवा पाउन थालेसँगै स्थानीयलाई राहत